ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအမြင်အာရုံဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုလှုံ့ဆော်မှုများဖြင့်နျူကလိယ accumbens နှင့်အမြင်အာရုံ cortex အကြားထိတွေ့မှု၌လိင်ကွဲပြားမှုများ - fMRI လေ့လာမှု (2015) - Your Brain On Porn
int J ကိုသင်ျခြို Res ။ 2015 မေလ 14 ။ Doi: 10.1038 / ijir.2015.8 ။ [EPub ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်၏]
Lee က SW1, Jeong BS1, Choi J ကို2, ကင်မ် JW3.
အမျိုးသားများအတွက်အကဲဆတ်သောအမြင်ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှု (EVES) အမျိုးသမီးတွေထက် သာ. ကြီးမြတ်အပြုသဘောတုံ့ပြန်မှုရှိသည်ဖို့လေ့ရှိပါတယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ဦးနှောက်ကွန်ယက်ကို EVES မှယောက်ျားကပိုထိခိုက်မခံတဲ့ကိုပေးသောအချက်များဦးနှောက်ကွန်ယက်ကိုလှုပ်ရှားမှုကိုအထောက်အကူပြုသောမရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်သည်။ ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ EVES ဖွငျ့ဦးနှောက်ဆက်သွယ်မှုပုံစံများအပေါ်လိင်ခြားနားချက်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအကဲဖြတ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်. ။ ငါတို့သည်လည်းလိင်ခြားနားချက်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများပြသကြောင်းဦးနှောက်ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူ testosterone ဟော်မုန်း၏အသင်းအဖွဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေး။ အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် Scan ဖတ်စဉ်အတွင်း 14 အထီးနှင့်အ 14 အမျိုးသမီးခေါ်ဆောင်သွားသို့မဟုတ် Non-ခေါ်ဆောင်သွားဖြစ်စေခဲ့ပုံပြောင်းလုပ်ကွက်ကိုကြည့်ပါရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ Psychophysiological အပြန်အလှန်ဆန်းစစ်ကြောင့် EVES နှင့်ဆက်စပ်သောအဖြစ်နျူကလိယ accumbens NA () ၏ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ အမျိုးသားများအတွက်သိသိသာသာ သာ. ကြီးမြတ် EVES-တိကျတဲ့ညာဘက် NA နှင့်လက်ျာနှစ်ဦးနှစ်ဖက် occipital cortex (လော့ကျွန်း) တို့အကြား functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုပြသခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, လက်ျာ NA နှင့်လက်ျာလော့ကျွန်းကွန်ရက်လှုပ်ရှားမှုအပြုသဘောယောက်ျားအတွက်ပလာစမာ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုယောက်ျား EVES မှအထိခိုက်မခံဖြစ်ကြ၏အကြောင်းပြချက်၎င်းတို့၏ပလာစမာ testosterone ဟော်မုန်းသင်ျခြို၏ level.International ဂျာနယ်အားဖြင့် modulated သောအမြင်ဆုလာဘ်ကွန်ရက်များအတွက်ပိုမိုအပြန်အလှန်, ကြောင်းအကြံပြု